Vula i-iPhone nge-IMEI ngentengo enhle
Uma ufuna kanjani vula i-iPhone nge-IMEI ngazo zonke iziqinisekiso nangentengo enhle, bese ukwenze ngokuzethemba kwe-Actualidad iPhone neLiberiPhoneIMEI. Ukuze wenze lokhu kufanele ukhethe izwe, opharetha we-iPhone yakho bese ufaka i-IMEI yakho. Uma ungamazi opharetha wakho noma uma i-iPhone yakho ibikiwe ngokweba, unensiza etholakalayo ukuyithola.
1 Ungayazi kanjani i-IMEI ye-iPhone ukuyivula?
2 Indlela ukuvula iPhone nge-IMEI?
Ungayazi kanjani i-IMEI ye-iPhone ukuyivula?
Ziningi izindlela ezizosivumela thola i-IMEI ye-iPhone yethu, kuqala ngokujwayelekile okutholakala kunoma iyiphi ifoni ephathekayo. Okuncono izindlela zokuthola le khodi Yilezi ezilandelayo:
Kusuka kukhiphedi yezinombolo: sizokufeza lokhu ngokuvula uhlelo lokusebenza lwefoni, sithinte ikhibhodi bese ufaka ikhodi * # 06 #. Inombolo izovela esibukweni. Ukuphuma, sithinta KULUNGILE.
Kusuka kuzilungiselelo ze-iPhone: singabona i-IMEI yethu ngokungena ku-Amasethingi / Okujwayelekile / Ulwazi nokushelelisela phansi lapho singafunda khona i-IMEI.
Ebheka ikesi le-iPhone: le kungaba yindlela elula, inqobo nje uma ibhokisi siseduze. I-iPhone IMEI isisitikha ngemuva futhi ibhalwe njengenombolo ye-IMEI / MEID.
Indlela ukuvula iPhone nge-IMEI?
Vula i-iPhone nge-IMEKusukela kusevisi enikezwa yi-Actualidad iPhone ne-LiberaiPhoneIMEI bekungeke kube lula. Inqubo ingaba elandelayo:
Sikhetha izwe phakathi kweSpain, i-United States noma iMexico ngokuchofoza kumathebhu angenhla kwetafula elinikeza insizakalo.
Lapho izwe selikhethiwe, kuzofanele sikhethe i-opharetha yemvelaphi ye-iPhone yethu. Uma i-iPhone yethu ivela komunye opharetha noma izwe, sizocofa ku- "OTHER OPERATORS" futhi sizokwazi ukubona uhlu olubanzi kakhulu lwamazwe nabahlinzeki. Kumele kuqashelwe ukuthi esimweni seSpain, ungakwazi khipha i-iPhone kubathwali abakhulus njengeVodafone, i-Orange noma iMovistar phakathi kwabanye.
Okulandelayo, sifaka i-IMEI ye-iPhone esifuna ukuyikhipha ebhokisini elingezansi kombhalo othi "Faka i-IMEI yakho lapha."
Kumele futhi sibeke i-imeyili yokuxhumana ebhokisini elingezansi kombhalo othi «Faka i-imeyili yakho lapha». I-imeyili izosetshenziswa kuphela futhi ngokukhethekile ukusazisa ukuthi i-iPhone isivele ivuliwe.
Sichofoza inkinobho ephuzi ukukhokhela insizakalo. Singakhetha ukukhokha ngekhadi lesikweletu noma nge-PayPal.
Uma sesikhokhelwe, singalinda kuphela ukuthola i-imeyili yokuqinisekisa lapho bezositshela khona ukuthi i-iPhone ikhishiwe futhi ingasetshenziswa nanoma yimuphi umsebenzisi.
Ubona kanjani, inqubo ye vula i-iPhone online Akunakuba lula. Uma okufunayo ukwazi opharetha we-terminal ngaphambi kokuyikhipha, lapha siyachaza wazi kanjani ukuthi iyiphi inkampani eyi-iPhone.